Isbedelka internetka iyo teknoolojiyadaha cusub ee da'da cusub, xogta weyn iyo codsigeeda ayaa markhaati ka ah baahida sii kordheysa. Ganacsiyada waqti-dhaafku waxay urursadaan macluumaad fara badan, kuwaas oo marka la falanqeeyo ay soo bandhigi karaan qeexitaannada ku saabsan isbeddelada macaamiisha iyo isku xirnaantooda. Falanqeyntu waxay suurtogal ka dhigeysaa in la keydiyo qeybtan macluumaadka oo laga shaqeeyo si loo sii falanqeeyo qoto dheerida ganacsiga. Waxay kaloo caawineysaa la socoshada xaaladda ganacsiga ee hadda jira iyo saadaalinta saadaasha ku saleysan fiiro gaar ah.
Si wax looga qabto baahida sii kordheysa ee falanqaynta Xogta Weyn ee ganacsiyadu uga faa'iideysan karaan hawl -maalmeedkooda, kooxdayada NewGenApps waxay xaqiijineysaa inaan mar walba talaabo hore u sii wadno annagoo isku darayna tijaabinta guriga dhexdiisa iyadoo lala kaashanayo hoggaamiyeyaasha farsamada oo ay ku jiraan Microsoft iyo Google. In yar oo ka mid ah horumarinteena isbeddelka ah ayaa xoogga saareysa: Nidaamka dirista is-barashada oo isku daraya barashada mashiinka iyo teknolojiyada xogta waaweyn